Famotsiam-bola : Hamafisina ny fiaraha-miasan’ny zandary sy ny Samifin -
AccueilSongandinaFamotsiam-bola : Hamafisina ny fiaraha-miasan’ny zandary sy ny Samifin
Famotsiam-bola : Hamafisina ny fiaraha-miasan’ny zandary sy ny Samifin
12/07/2018 admintriatra Songandina 0
Mpirahalahy mianala. Hamafisina ny fiaraha-miasa eo amin’ny zandarimariam-pirenena sy ny sampandraharaha malagasy iadiana amin’ny famotsiam-bola na ny Samifin. Nisongadina izany tamin’ny fitsidihina ara-pomba ofisialy nataon’ny Tale Jeneralin’ny Samifin, Lamina Boto Tsara dia, ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena vaovao, ny Jeneraly Randriamanarina Jean Christophe. Tetsy amin’ny birao fiasan’ny SEG tetsy amin’ny Toby Jeneraly Ramarolahy Betongolo no nanaovana ny fihaonana omaly tolakandro.
Efa nety ny fiaraha-miasa teo amin’ny roa tonta hatramin’izay, ka niompana tamin’ny fanamafisana izany ny fihaonana. « Tsy latsa-danja ny avy ao amin’ny zandarimariam-pirenena raha oharina amin’ireo hery hafa raha ny lafin’ny teknika amin’ny fitantanana ny asa no jerena », araka ny fanazavan’ny Tale Jeneralin’ny Samifin. Nisaotra sy nankasitraka ny Samifin kosa ny avy amin’ny zandarimariam-pirenena tamin’ny fiaraha-miasa. Anisan’ireo ezaka nataon’ny samifin ny fanomezana fiofanana ny zandary mikasika ny ady amin’ny famotsiam-bola, ary mbola hanohizana ny fiaraha-miasa. « Nifanome toky ny roa tonta fa efa matotra ny fiaraha-miasa ary hamafisina sy hohatsaraina izany », araka ny fehin-kevitry ny Jeneraly Randriamanarina Jean Christophe.
Mihosin-dra ny tanàna. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana amin’izao ankatoky ny fifidianana izao. Tsy misy fitsaharana intsony izany na dia manao izay ho afany aza ny mpitandro filaminana. Araka izany dia nisy jiolahy nirongo fiadiana maranitra ...Tohiny
Francois Hollande:MANOHANA AN’I MADAGASIKARA HATRANY I FRANTSA
Aorian’ny fandevenana : Iza indray no hatao sorona?
RLM Communication : Nankalaza ny faharoa taona nijoroany
CENI:HANOMBOKA NY FANAVAOZANA NY LISI-PIFIDIANANA